सुस्ताउँदै कोरोना महामारी, अस्पतालका बेड खाली हुन थाले (भिडियो) – Nepal Press
२०७८ जेठ ३१ गते २०:५१
काठमाडौं । कोरोना संक्रमणको ग्राफ ओरालो लागेसँगै अस्पतालहरु विस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किन थालेका छन् । महामारी उत्कर्षमा पुग्दा सबैभन्दा बढी चाप व्यहोरेका टेकुदेखि टिचिङसम्मका अस्पतालमा हामीले आज स्थलगत अनुगमन गर्दा महामारी निकै हदसम्म शान्त भइसकेको भान भयो ।
एक महिना अगाडिसम्म टेकुस्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका आँगन र कोरिडोर पनि भरिभराउ हुन्थे । अहिले त्यो अवस्था छैन । अस्पतालको इमर्जेन्सी वार्डमा बिरामीको संख्या न्यून देखिएको छ । हामी पुग्दा इमर्जेन्सीका केही बेडहरु खाली थिए ।
जेठको पहिलो साता यस अस्पताले १ सय ३७ जनासम्म कोभिडका बिरामी राखेर उपचार गर्‍यो । अहिले ८७ जना बिरामी उपचाररत छन् ।
‘जेठको पहिलो सातासम्म ४० जनाभन्दा बढी बिरामीलाई आँगनमा राखेर उपचार गर्न बाध्य थियौं । दोस्रो हप्तापछि विस्तारै घट्दै गयो,’ अस्पतालका निर्देशक डा. सागरराज भण्डारी भन्छन् ।
बिरामीहरू काठमाडौं बाहिरबाट विशेष उपचारका लागि अस्पतलाल आइरहेका छन् । धादिङ, गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे लगायतका जिल्लाबाट आउने गम्भीर प्रकृतिका बिरामीको संख्या भने कम नभएको डा. भण्डारी बताउँछन् ।
डा. भण्डारीका अनुसार इमर्जेन्सीमा बिरामी घटे पनि आइसोलेसन र आइसीयू भने अहिले पनि लगभग प्याक छन् । आइसोलेसनमा रहेको ४० बेड सबै प्याक छन् भने २८ वटा आइसीयुमध्ये एउटा खाली छ ।
टेकुलगायत काठमाडौंका अन्य अस्पतालमा पनि कोभिडका संक्रमितहरू घटेसँगै कोभिड बेड खाली हुने क्रम बढ्दै गइरहेको छ । काठमाडौंको त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा अहिले कोभिडका बिरामी १ सय ५७ जना छन् ।
अस्पतालमा कोभिडको ६० वटा वार्ड अहिले खाली भएको अस्पतालका कोभिड व्यवस्थापन समितिका संयोजक डा. सन्तकुमार दास बताउँछन् । उनका अनुसार आकस्मिक कक्ष पनि खाली हुँदै गइरहेका छन् । आइसीयु बेड भने प्याक रहेको दासले बताए ।
‘आइसीयु ५७ वटामा ५७ वटै प्याक छ,’ उनी भन्छन् ।
डा दासका अनुसार अहिले संक्रमितहरूमध्ये बाहिरबाट आउने क्रम केही बढेको छ ।
पाटन अस्पतालमा २ सय कोभिड बेडमा १ सय ३० खाली छन् । अस्पतालका कार्यकारी निर्देशक डा रवी शाक्यका अनुसार आइसीयु भने भरिभराउ नै छन् ।
वीर अस्पतालमा पनि आइसीयुबाहेक जनरल वार्ड भने खाली हुँदै गएका छन् । अस्पतालका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डा जागेश्वर गौतमका अनुसार जम्मा १ सय ३० बेडमा मात्र संक्रमित छन् ।
‘आइसीयु पनि अभाव हुन नदिन १८ वटा आइसीयु बेड व्यवस्थापन गर्दैछौं । केही दिनमा तयार हुन्छ,’ उनले भने ।
राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरले विस्तारै कोभिड वार्ड हटाएर ट्रमा नै सुरु गर्दैछ ।
‘नयाँ कोभिडको लागि अब भर्ना लिँदैनौं । किनकि अन्य अस्पतालमा नै सहजै बेड पाइन्छ,’ अस्पतालका निर्देशक डा. सन्तोष पौडलले भने ।
अस्पताललमा कोभिडका ४० जना बिरामी छन् । जसममध्ये आइसीयुमा १० जना, ३० जना वार्डमा छन् ।
ननकोभिडका बिरामी बढ्दै
अस्पतालहरूमा कोभिडका बिरामी घटेसँगै ननकोभिडका बिरामी बढ्दैछन् । टिचिङमा अहिले ननकोभिडका बिरामी संख्या २ सय ८० पुगेको छ । यो केहीदिन यता बढ्दै गएको हो । डा. दासका अनुसार हाल अस्पतालको कोभिडका वार्डलाई कन्भर्ट गरेर तत्काललाई ननकोभिड बनाइएको छ ।
पाटन अस्पतालमा पनि ननकोभिडका बिरामी विस्तारै बढ्दै गएका छन् ।
‘हाम्रो अस्पतालमा ननकोभिडका बिरामी लकडाउनअघि फूल हुन्थे । लकडाउनपछि घटेका थिए । फेरि अहिले विस्तारै बढ्न थालेका छन्,’ कार्यकारी निर्देशक डा शाक्यले भने ।
‘आइसियु अझै एक महिना प्याक’
अस्पतालहरूमा अझै एक महिना आइसीयु अभाव हुने डाक्टरहरूको आँकलन छ । वरिष्ठ सरुवा रोग विशेषज्ञ डा. शेरबहादुर पुन आइसीयु केही हप्ता वा महिनासम्म अभाव हुनसक्ने बताउँछन् ।
‘हामीसँग धेरै आइसीयु नै छैन । त्यसैले यो समस्या त सधैं निरन्तर रहन्छ,’ डा पुन भन्छन् ।
संक्रमण भने अब विस्तारै घट्दै जाने उनको अनुमान छ ।
‘लकडाउनको प्रभावले पनि संक्रमण घट्दै गइरहेको छ । सायद एक महिनामा अझै देखिने गरी दर घट्छ,’ उनी भन्छन् ।
अधिकांश बिरामी खोप नलगाएका
गम्भीर प्रकारका अधिकांश बिरामी भने खोप लगाएका नै छन् । टेकु अस्पतालका निर्देशक डा भण्डारीका अस्पतालमा खोप लगाएर पनि संक्रमित भएकाहरू भर्ना हुनु परेको छैन ।
‘खोप लगाएका भर्ना हुनु परेका तथ्य निकै कम छन् । गम्भीर देखिएका र मृत्यु भएका धेरैजसो बिरामी युवाहरू छन् । जसले खोप लगाएमा थिएनन्,’ उनी भन्छन् ।
डा. भण्डारी तेस्रो वेभको जोखिमबाट जोगिन सरकारले खोपलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘खोपको वितरण प्रभावकारी गराउन सकियो भने तेस्रो वेभको जोखिम निकै कम हुन्छ । जनस्वास्थ्यको मापदण्ड र खोपको आवश्यकतालाई सरकार र नागरिकले ध्यान दिनुपर्छ,’ उनी सुझाउँछन् ।
प्रकाशित: २०७८ जेठ ३१ गते २०:५१